Shiinaha Kung Pao warshad digaag iyo saarayaasha | Huikang
Kung Pao Chicken waa cunno dhaqameed caan ah oo caan ka ah gudaha iyo dibada. Waxay ku jirtaa cunnada Shandong, cunnada Sichuan, iyo cunnada Guizhou, iyo alaabada ceeriin iyo qaababkeedaba way ka duwan yihiin. Asalka saxankan wuxuu xiriir la leeyahay digaagga maraqa lagu cuno ee ku jira cunnada Shandong, iyo digaagga basbaaska leh ee ku jira cunnada Guizhou. Markii dambe waa la hagaajiyay oo waxaa sii waday Ding Baozhen, oo ah gudoomiyaha Shandong iyo Sichuan oo ah barasaabka Qing, waxayna samaysteen digaag saxan-Gongbao ah. Waa loo gudbay ilaa maantadan, saxankan sidoo kale waxaa loo kala saaray inuu yahay saxanka maxkamadda Beijing. Markii dambe, Kung Pao Chicken sidoo kale wuxuu ku faafay dibedda.
Digaagga Kung Pao waxaa lagu kariyaa digaag ahaan maadada ugu weyn waxaana lagu kabayaa lawska, chili iyo maaddooyinka kale ee kaabayaasha ah. Casaan laakiin maahan basbaas, basbaas laakiin aan kulul, dhadhan kulul oo basbaas leh, hilib siman oo jilicsan. Dhadhanka dhadhanka leh awgeed, jilicsanaanta digaagga iyo qallafsanaanta lawska.
Bishii Sebtembar 2018, waxaa lagu qiimeeyay inay tahay "cunnada Shiinaha" ee ka mid ah tobanka suxuun ee ugu caansan Guizhou iyo tobanka ugu sarreeya ee Sichuan.
Digaagga 'Kung Pao Chicken' waxaa lagu gartaa macaanida basbaaska leh iyo xawaashnimada macaan. Jilicsanaanta digaagga iyo jajabnaanta lawska, afku waa basbaas iyo jilicsan yahay, casaan laakiin ma ahan basbaas, basbaas laakiin xoog ma leh, hilibkuna waa siman yahay oo qallafsan yahay.
Ka dib markii digaagga kung pao la soo dhoofiyo, cirifka carabku wuxuu dareemayaa waxoogaa kabuubyo ah oo khafiif ah oo basbaas ah, ka dibna wuxuu u macaan yahay burooyinka dhadhanka, waxaana jiri doona xoogaa "dhanaan iyo qadhaadh" dareen ah marka la ruugaayo, digaagga kulul hoostiisa, basbaas, dhanaan iyo macaan baakad leh, Basasha guga, lawsku wuxuu dadka ka dhigaa inay doonayaan inay joojiyaan.
Magacyada Digaagga Kung Pao meel kasta waa isku mid, laakiin qaababku way ka duwan yihiin:
Nooca Sichuan ee Kung Pao Chicken wuxuu adeegsadaa naasaha digaagga. Sababtoo ah naasaha digaagga ma sahlana dhadhamintiisa, digaaggu waa u fududahay inuu noqdo mid jilicsan oo aan jilicsanayn. Waxaad u baahan tahay inaad ku garaacdo digaagga dhabarka mindi dhowr jeer ka hor intaadan cabirin dhadhanka, ama ku rid hal ukun oo Cadaan ah, digaaggan ayaa noqon doona mid jilicsan oo jilicsan. Nooca Sichuan ee Kung Pao Chicken waa inuu isticmaalaa looska la soo gaabiyey iyo guntimaha chili ee la qalajiyey, dhadhankuna waa inuu ahaadaa miro macaan. Dabaaldega basbaasku waa mid aad loo shiilay oo udgoon yahay, oo muujiya dhadhanka basbaaska leh.
Nooca cunnada ee 'Shandong' ee Kung Pao Chicken wuxuu adeegsadaa bowdyo digaag badan. Si si fiican loo muujiyo dhadhanka digaagga Kung Pao, cunnada Shandong sidoo kale waxay ku dareysaa caleemaha bamboo la jarjaray ama fardaha la jarjaray. Dhaqanka Kung Pao Chicken wuxuu qiyaas ahaan la mid yahay kan cunnada Sichuan, laakiin fiiro gaar ah ayaa loo siiyaa shiilida, si loo ilaaliyo ulaha digaagga.
Nooca Guizhou ee Kung Pao Chicken wuxuu adeegsadaa Caba Chili, oo ka duwan noocyada Sichuan iyo Shandong. Nooca Guizhou ee Digaagga Kung Pao waa milix iyo basbaas, taas oo waxyar ka macaan oo dhanaan. Fadlan fiiro gaar ah u yeelo ereyga "dhanaan". Kuleylka iyo dhanaanku waa mid ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee lagu kala saaro cunnada Guizhou iyo tan Sichuan.
Hore: Macaan Iyo Feeraha Fudud ee Fudud
Xiga: Digaag la jarjarey Oo Basbaas ah